Gandaki Sanchar » पर्वत अस्पतालमा गम्भिर सङ्क्रमितको पनि उपचार गरिने
पर्वत अस्पतालमा गम्भिर सङ्क्रमितको पनि उपचार गरिने
पर्वतमा तिहार पछि कोरोना संक्रमीत अझै बढ्ने चेतावनी
कार्तिक २० पर्वत । गम्भिर खालका कोरोना सङक्रमितको पनि पर्वत अस्पतालमै उपचार गरिने भएको छ । पोखराका अस्पतालहरुमा विरामीहरुको चाप बढ्दै गएपछि पर्वत अस्पतालले कोरोना सङ्क्रमितलाई पोखरा रिफर नगरि जिल्लामै उपचार गर्न अस्पतालमा सबै खाले पूर्वाधार तयार पारेको जनाएको छ ।
पर्वत अस्पतालका प्रमुख डा. शिशिर देवकोटाले अक्सिजन, भेन्टिलेटर र आइसियू कक्षको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा रहेको बताउनुभयो । तिहार लगत्तै पर्वत अस्पतालले गम्भिर विरामीलाई भर्ना गरेर उपचार थाल्ने देवकोटाले जानकारी दिनुभएको छ । अस्पतालले प्रदेश सरकारको सहयोगमा हार्लै अक्सिजन प्लाण्ट शुरु गरेको छ भने भेण्टिलेटर जडान गरेको छ । तिहार पछि जिल्लामा कोरोना सङ्क्रमित बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।
पर्वतमा संक्रमितको संख्या १ सय ७८ पुगेको छ । २४ जना सक्रिय संक्रमित मध्ये ५ जना आइसोलेसन र १९ जना होम आइसोलेसनमा बसेका छन् ।पर्वतमा कोरोना सङ्क्रमितमा गम्भिर लक्षण देखिएमा पोखरा रिफर गर्ने गरिन्थ्यो । प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार पोखरामा दैनिक एक सयको हाराहारीमा सङ्क्रमित देखिन थालेपछि अस्पतालमा चाप बढ्दो छ ।
आईसियू र भेण्टिलेटरमा राख्नुपर्ने गम्भिर बिरामीहरु बढेका छन् । पोखरामा अस्पताल भरिन थालेपछि सामाजिक विकास मन्त्रालयले सबै जिल्लामा भेण्टिलेटर सहितको अस्पताल चलाउन निर्देशन दिएपछि पर्वतमा पनि कोभिड अस्पताल सञ्चालन गर्न थालिएको बुझिएको छ । जिल्लाका सबै स्थानीय तहहरुले पनि पाँच बेडको अस्थाई अस्पताल निर्माण गरिरहेका स्वास्थ्य कार्यालय पर्वतका प्रमुख डा. भोजराज गौतमले जानकारी दिनुभयो ।
प्रकाशित मिति २० कार्तिक २०७७, बिहीबार ०१:०८